Faa'dooyinka Muuska. - FOOLAAD MEDIA
Home » Caafimaadka » Faa’dooyinka Muuska.
Muusku wuxuu kamid yahay qudrada uu alle nagu maneestay oo laheli karo sanadkii oo dhan islamarkaana laga heli karo daawooyin vitamins ah oo wax tar uleh jirka qofka bini’aadamka ah taasoo lagu ogaaday daraaso cusub oo dhakhaatiirtu ay cadeeyeen .
Hadaba faa’iidooyinkiisa waxa kamida
xaga awooda oo uu kordhiyo taasi oo laga helo vitamins iyo macdano kala duwan oo jirta ubaahan yahay si loo helo arintaas anso shegnay oo dhakhaatiirtu kutaliyeen waa in aroortii qofku uu cuno 2 xabo oo muus ah waxay aad ugusii haboontahay dadka jimicsiga dameeya .
muusku waxa kale oo uu ka qayb qaataa xoojinta iyo awoodsiinta lamaanaha .
muusku waxa uu faa’iido uleeyahay dumarka xilliga ay ku jiraan 7 baadka .
muusku waxa uu faa’iido uleeyahay habwareega dhiiga sida sifeenta wadnaha waxa uuna kordhiyaa dhiiga cad iyado ayku jirto #vitamin_B6 oo awood siiyo islamarkaasina kahortag fiican u ah in uu ku faafo jirka qofka macaanka leh .
Wax yaabaha kale ee muhiimka ah ee uu muusku leeyhy waxa kamida kaqayb qaadashada biyaha jirka ubaahan yahay sido kale waxa uu ka qayb qaataa sifeenta caloosha iyo gaajada oo uu jabiyo .
Muusku waxa uu dawo kayahay shubanka iyado ay dhakhaatiirtu ay cadeeyeen in uu kaga wanaagsan yahay daawooyinka kiimikalka ah .
Muusku waxa uu ka qayb qaataa baabi’inta istareeska ama jareeska saad utaqaanaba iyadoo dhakhaatiirtu ay sheegeen in ayku jirto maadooyin jirka bini Aadamka siiyo daganaan iyo farxad .
Sido kale muusku wakhtiga ay dumarku uurka leeyihiin waxa uuka joojiyaa mataga badan waxa uuna kacaawiyaa in uu qaboojiyo caloosha islamarkaana uu siiyo tamar .
Faa’iidooyinka kale ee uu muusku lee yhy waxa kamida ah kahortaga cudurka kansarka si uuna ugu faafin jirka bini’aadamka ah .
Intan iyo in kabadan oo faa’iidooyin ah ayuu muusku uleeyahay jirka qofka bini’aadamka ah .
Wll lasoco qaybta 2 aad insha allaah waxaana uga hadli doonaa faa’iidada qolofka qaraha ama xabxabka uu uleeyahay jirka qofka bini’aadamka ah